भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री त्रिशाकरको सेक्स भिडियो लिक, रुदैँ आइन लाईभ
भिडियोका कारण अभिनेत्रीको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।
२०७८ श्रावण ३१ आइतबार
बेलुकी ७:३५ बजे
न्यूज ब्यूरो, एजेन्सी । भोजपुरी फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री त्रिशाकर मधुको एमएमएस सार्वजनिक भएपछि रुँदै लाईभमा आएकी छिन् ।
एक केटाका साथ देखिएको उनको एमएमएस अहिले भाइरल बनेको छ । उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिप्रति उनी आक्रोशित बनेकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छिन्, ‘भगवानले सबै देख्छन् । मलाई गाली खुवाउन मेरो प्राइभेट भिडियो भाइरल गर्दिए । उनले भिडियो सार्वजनिक गर्नेलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘यदि तपाइँको बहिनीसँग कसैले विवाह गरेर अर्को दिन सुहागरातको भिडियो भाइरल गर्दियो भने राम्रो लाग्छ हो ? ।’
भिडियो लाइभमा उनले रुँदै भनेकी छन् ‘म के गरु केही सोच्न सकेको छैन ।’ मानिसहरु उनलाई अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्, भिडियोमा को हुन् ? । भिडियोका कारण अभिनेत्रीको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।
आलोचनाको कारण उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट समेत प्राइभेट गरेकी छन् । अहिलेसम्म भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति थाहा हुन सकेको छैन । मधुले कयौं भोजपुरी स्टार्ससँग काम गरिसकेकी छन् ।
न्यूज ब्यूरो, एजेन्सी । बंगलादेशमा हिन्द्र विरोधी द्वन्द्व चर्किएको छ । यसको सवत्र आलोचना भइरहको छ । हिन्दूको महान चाँडपर्वको बेला बंगलादेशका मुश्लिमहरुले हिन्दूहरुमाथि अत्याचार गरिरहेका छन् । यसैक्रममा बंगलादेशमा एक
न्यूज ब्यूरो, एजेन्सी । बंगलादेशमा हिन्द्र विरोधी द्वन्द्व चर्किएको छ । यसको सवत्र आलोचना भइरहको छ । हिन्दूको महान चाँडपर्वको बेला बंगलादेशका मुश्लिमहरुले हिन्दूहरुमाथि अत्याचार गरिरहेका छन् ।
यसैक्रममा बंगलादेशमा एक मुश्लिम युवकलाई स्थानिय प्रहरी पक्राउ गरेको छ । हुनमानको खुट्टा अगाडि मुश्लिमको पवित्र ग्रन्थ कुरानलाई राखेपछि इकवाल हुसैनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बंगलादेशको इतिहासमा पहिलो पटक हिन्दू विरोधि दंगा भड्किएको छ । कुरान हुनमानको अुट्टा अगाडि राखिरहेको त्यहाँ जडा गरिएको विभिन्न सिसीटिभीको फुटेजको आधारमा उनलाई हिरासतमा लिइएको हो ।
उक्त घटनापछि हिन्दू मुश्लिम द्वन्द्व चर्किएको छ । त्यहाँ रहेको विभिन्न हिन्दू पण्डाल र मन्दिरहरुमा मुश्लिमहरुले आक्रमण गरेको जनाइएको छ ।